Akụkọ - Ihe nhicha mmiri ọ bara uru? Kedu ihe kpatara ị ga - eji tinye PP cotton? Xinpaez nara gi nghota pp owu filter
Imirikiti ndị na-ehicha mmiri mmiri, ihe mbido nke mbụ bụ ihe nhicha nke owu. Ihe nhicha nke mbụ abụghị naanị na ọ na-emetụta ogo mmiri, kamakwa ọ na-emetụta nsonaazụ atọ ma ọ bụ nke anọ na ntanetị na ndụ nke ihe nzacha ahụ, yabụ PP Ogo nke ihe nhicha nke owu dị ezigbo mkpa maka ihe nhicha mmiri.
1. Gịnị bụ eyi owu iyo? Kedu uru ndị ọ bara?
PP owu filter element: a non-toxic and urorless polypropylene urughuru, a tubular iyo mmewere na-ọnya na bonded site kpo oku, agbaze, spinning, traction, na-anata akpụ. The kasị elu ziri ezi nke filtration nwere ike iru 1 Micron. A na-edozi nhazi nke ihe nzacha ahụ site na mpụga na ọkwa dị n'ime. Na ịbịaru nso na oyi akwa nke ihe ndozi, obere pore buru ibu na nzi ezi nke nzacha ahụ. PP owu nwere njirimara nke nnukwu eruba, nkwụsị corrosion, nrụgide dị elu na ọnụ ala. A na-ejikarị ya eme ihe iji gbochie nnukwu ihe ndị dị ka nchara, ihe mkpofu, na ihe a kwụsịrị na mmiri.
1. Ọnọdụ kemịkal nke owu PP dị ezigbo mma. Ngwurugwu kemịkal nke PP owu dị ezigbo mma. Na mgbakwunye na ịbụ nke acid sulfuric ndọpụ na nitric acid gbakọtara, ọ naghị arụ ọrụ na ndị ọrụ kemịkal ndị ọzọ. Ya mere, ọ nwere ike iguzogide acid, alkali, ihe ndị na-edozi ahụ na mmanụ na-enweghị nchegbu gbasara mmetọ nke abụọ.
2. Onweghị ihe mmetọ nke mmetọ site na ngwaọrụ ndị ọzọ n'oge njikọta nke ihe mkpuchi owu owu. Bonding nke eyi owu nyo cores anaghị achọ iji ihe ndị ọzọ. Ọ dabere na njikọ ya na njikọta ya na ibe ya iji mepụta cores filter nke nha dị iche iche. Enwere ihe egwu nke ihe ndị ọzọ.
3. Eyi owu iyo anaghị achọ ike ọkọnọ pressurization. N'ime oge njigide onwe onye, ​​a na-eme usoro ihe ntanetị nwere akụkụ atọ, nke nwere nnukwu akụkụ pụrụ iche na porosity dị elu. Nke a na-eme ka ihe nhicha PP na-ebu nwere nnukwu unyi, ma n'otu oge ahụ na-enye ohere mmiri ka ọ gafere ngwa ngwa na-enweghị mkpa mgbakwunye nrụpụta ngwaọrụ. Nke a pụtakwara na eyi owu nyo mmewere anaghị achọ a ike agbam ume.
4. 80% nke adịghị bụ eyi owu owu multi-oyi akwa nyo Ọdịdị na eyi owu nyo, onye ọ bụla oyi akwa nwere ike intercept na-echekwa adịghị na mmiri. Eriri na mpụta dị na mbara, eriri ndị dị n’ime ahụ dị gịrịgịrị, mpempe akwụkwọ dị n’èzí na-atọpụ, akwa ahụ dị n’ime akarịala, na-akpụ usoro gradient nwere ọtụtụ akụkụ. N'iji usoro a dị iche iche, ikike ijide unyi ga-abụ nnukwu, na 80% nke adịghị ọcha ndị ehichapụrụ site na mmiri na-emecha emecha na nhicha owu.
Ihe 4 dị n'elu bụ uru nke ihe nhicha owu nke owu na-ehicha mmiri. Na mgbakwunye, ekwesiri ịdeba ama na ndụ ọrụ nke ihe nhicha owu PP na-abụkarị ọnwa 3-6, a ga-edochi ya oge niile iji hụ na nsacha mmiri. Ọnụ ego nke owu PP dị ala, a na-ejikarị ya na akara nke mbụ nwere oke ngbanwe dị elu iji nweta mmetụta nke mbenata ụgwọ.
2. Kedu otu esi amata ogo ngwa owu owu?
A na - ekpebi njịcha ihe eji esi mmiri owu. Mkpụrụ ime dị n'ime nke akwa akwa PP dị elu siri ike na edo, na enweghị ike ịhụ anya ọdịiche a na oge ịzụrụ. Kedu ka anyị kwesịrị isi amata ọdịiche?
Nke mbu: lelee aro. Anyị nwere ike iji aka anyị tụọ arọ ahụ. N’ibu dị arọ, njupụta nke eriri ihe nzacha na-ebuwanye ibu.
Nke abuo: lee ihe. Mgbe ị na-ahọrọ ihe nhicha nzacha, ị ga-enwerịrị nchekwube maka ihe nke ihe nza. Agba nke mgbe nile nyo akwụkwọ bụ edo na akwụkwọ elu bụ ezigbo onye. Agba nke akwụkwọ nza nke ihe nzacha dị ala abụghị otu, na ederede adịghị mma.
Nke atọ: lelee mkpakọ. N'ozuzu, nke ka ukwuu njupụta njupụta nke ihe nza, nke ka mma mkpakọ arụmọrụ, na ogo nke ihe eji eme ihe owu. Anyị nwere ike ikpe ikpe na-emetụ aka. Ike nke aka ahụ, ọ ka mma ịrụ ọrụ mkpakọ.
Nke anọ: lee colloid. Ihe nhicha ahụ na - arụ ọrụ nwere ezigbo gel na ezigbo ekwenti, ebe ihe nhicha nke dị nro dị nro ma nwee adịghị mma.
3. Kedụ ka esi achọpụta ma a ga-edochi ihe nhicha nke owu PP? Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na ya mgbe ị na-edochi owu owu PP?
Ihe ọhụrụ PP owu na-acha ọcha. Can nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ma mmiri dị ọcha ma ọ bụ nke adịghị mma site na ogo nke oji mgbe ejiri owu PP.
Rịba ama: A ga-ekpochapụ ihe nzacha ahụ mgbe echichi. Oge izugbe ga-abụ ihe karịrị 5 nkeji.
The eyi owu nyo mmewere bụ nke mbụ ogbo nyo mmewere nke mmiri purifier. A na - enwetachakwu adịghị ọcha, etu esi amachie ihe nza ahụ. Ya mere, ndụ nke ihe owu nhicha owu na-adị mkpụmkpụ. Mpaghara nwere ezigbo mmiri adịghị mma nwere ike dochie anya ọnwa atọ. Mpaghara nwere ezigbo mma mmiri ekwesịghị ịgafe ọnwa 9 na nke kachasị ogologo.
Tụkwasị na nke ahụ, ngbanwe nke ihe nzacha ahụ dịtụ mfe, ndị ọrụ Aspline nwere ikike aka ike nwere ike dochie ya dịka ntuziaka ntuziaka, nke enwere ike itinye ya na-enweghị nna ukwu, yana nwekwara ike ịchekwa ego.